अपरिभाषित समृद्धिको परिभाषित दु:ख– १
माघ १३, २०७५ आहुति
काठमाडौँ — नेपालको सत्ताधारी धारले नाभिदेखिको बल लगाएर प्रचार गरेको विषय हो समृद्धि । दर्जनौं वर्षदेखि भोक र अभावबीच बाँचेको नेपाली समाजको ठूलो जनसंख्यालाई यसले जादुमयी आकर्षण र आशा जगाएको देखिन्छ । पार्टीबाट अलग रहेर आलोचनात्मक चेतसहित बौद्धिक कर्म गरिरहेका कतिपय बौद्धिकलाई यस नाराले लुरुक्क पार्टी सदशयता नवीकरण गर्ने स्थितिमा पुर्‍याएको छ ।
पुँजीवादको विकल्पबारे तीखो बहस गर्ने बौद्धिकहरूको एउटा जमातलाई यसले मलिन स्वरमा आगापिछा ख्याल गरेर बोल्ने तुल्याइदिएको छ । दुई तिहाइको आकारसहित समृद्धिको नारा आउँदैनथ्यो भने सायद यसले बहुआयामिक प्रहार गर्दैनथ्यो । यहाँ समृद्धि बराबर दुई तिहाइ अनि दुई तिहाइ बराबर समृद्धिका रूपमा प्रकट हुनाले बडा बडा आलोचनात्मक चेत भूकम्पमा भवनहरूजस्तै डोलायमान देखिएका छन् ।
पञ्चायत व्यवस्थाले विकासको मूल फुटाउने घोषणा गर्‍यो । धारा, कुलोमा विकास ल्याउने हैन, मूल नै फुटाइदिने ! आजको शासकीय धारका नेताहरूले जिउलाई अररो बनाएर समृद्धिको भाषण गरेको देख्दा विकासको मूल फुटाउने पञ्चहरूको दमनकारी दम्भयुक्त अनुहारको याद आउन थालेको छ । समृद्धि सबैलाई चाहिएको छ । तर कस्तो समृद्धि ? समृद्धिको विचारधारा हुन्छ कि हुन्न ? समृद्धिको राजनीति हुन्छ कि हुन्न ? समृद्धिको वर्ग पक्षधारता हुन्छ कि हुन्न ? समृद्धिसँग सम्बन्धित आधारभूत प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । नेपाल विश्वमा अविकसित र गरिब भयो किन र कहिलेबाट ? गरिबी थप्दै लिएर आउने कारणहरू के हुन्, ती कारण अब गायब भइसके ? यथावत् छन् भने ती कारणमाथि विजय पाउने रणनीति के ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसको ऐतिहासिक उत्तर दिने साहस नगरी समृद्धिको यात्रा सुरु हुँदैन ।
जुद्धशमशेर राणाले जुवाको खालमा आफूविरुद्ध पल्टेको चौका दाउलाई हुकुमले पञ्जा बनाएका थिए रे, सोही चालमा ‘हामीसँग दुई तिहाइ छ, त्यसैले समृद्धि हुन्छ भनेसी हुन्छ, हामीले भनेको मान’ भनी चिच्याएर त भविष्यको नजरमा फाल्तु जोकर ठहरिने सम्भावना बढी हुन्छ । संसारमा समृद्धिको ढाँचा र दिशाबारे गम्भीर बहस भइरहेछ, नेपालको सत्ताधारी धारले अलापे
जस्तो अपरिभाषित समृद्धिको कुरा प्राज्ञिकस्तरमा अहिले छिर्नै सक्दैन ।
केही सय वर्षदेखि संसार हाँक्ने मुख्य मौका पुँजीवादी व्यवस्थाले पायो । केही दशक केही देशमा साम्यवादीले पाए । साम्यवादीहरू मानव इतिहासकै प्रतिपक्षी सिकारु थिए । वितरण र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा केही गुणात्मक पृथक् काम गरे पनि पूर्ण रूपको समृद्धिको पृथक मोडल स्थापित गर्न नसकी ढल्न पुगे । पुँजीवादी युग सुरु भएदेखि समृद्धिको नेतृत्वमा हालीमुहाली पुँजीवादी व्यवस्थाले गर्दै आएको यथार्थ मान्नैपर्ने हुन्छ । अपवादका प्रयत्न पनि होलान् तर आज साम्यवादीका नाममा केही देशहरूको पनि समृद्धिको दिशा र मोडलको सार पुँजीवादी नै देख्न धेरै गम्नु पर्दैन ।
पुँजीवादी व्यवस्थाले ल्याएको समृद्धिले विज्ञान प्रविधिलाई तीव्र विकास हुने अवसर दियो । सडक, सुरुङ, हवाई, अन्तरिक्ष, अग्ला भवन, कारको व्यापक उत्पादन, सेवा क्षेत्रको अकल्पनीय विस्तार यसले गर्‍यो । सामन्तवादी युगमा भन्दा जीवनलाई सहज र सेवायुक्त बनायो जुन हरेक पछिल्लो युगमा अघिल्लो युगको तुलनामा हुने गर्छ । सारमा भन्दा पुँजीवादी समृद्धिले भौतिक वस्तुहरूको निर्माणमा असाधारण प्रगति ल्यायो ।
वागमतीउपत्यकामापानीका मुहान सबै सुकाइदिने गरी विकास गरे । यहाँ सकियो पानी अनि मेलम्ची लुट्न गए । वागमतीउपत्यका आफैंलाईपानीबाट हराभरा बनाउने सोच छैन ।
पुँजीवादी समृद्धिले दुइटा गम्भीर विषयलाई बेवास्ता गर्‍यो । एक, यसले प्रकृतिको दोहन र त्यसमाथिको प्रदूषण विनाशकारी ढंगले गर्‍यो । वैज्ञानिक हकिङको चिन्तामा भन्दा करोडौं वर्षको पृथ्वीमा अब छ सय वर्षभन्दा बढी मानिस बस्न नसक्ने गरी विनाश गर्‍यो । पुँजीवादी व्यवस्थाको नाभि पुँजीपतिको निजी नाफा कमाउने लालसामा आधारित हुने भएकाले प्रकृति भाडमा जाओस् तर जसरी पनि नाफा कमाउन तल्लीन रह्यो । लाखौं पानीका मुहान सुके, करोडौं हेक्टर जंगल सकिए, सिंगो पृथ्वीवासीको सम्पत्ति खनिज निजी प्रयोगका निम्ति रित्तिँदै गए ।
पुँजीवादी शासकको सनकका भरमा सिंगै पृथ्वी ध्वस्त पार्ने परमाणु बम बनाइए । पृथ्वी र मानव जातिलाई मृत्युको डिलमा ल्याइपुर्‍याउने पुँजीवादी समृद्धि विनाशकारी समृद्धिको दिशा र मोडेल बनेको यथार्थ अब खण्डन गर्न सकिने गरी उपस्थित छैन । दुई, पुँजीवादी समृद्धि व्यक्तिगत स्वार्थ र नाफामा आधारित हुन्छ । यसले धनी हुन एक मान्छेले अर्को मान्छेविरुद्ध जे गरे नि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्‍यो । श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रहरूको अथाह शोषण गर्दै अघि बढ्यो र आज केही दर्जन परिवारको ढुकुटीमा संसारकै पचासी प्रतिशत धन थुप्रिन पुग्यो । पुँजीवादी समृद्धिकै लागि युरोपले एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकालाई केही सय वर्ष लुट्यो ।
लुट्नका निम्ति युद्ध, षड्यन्त्र, घुसपैठ, हत्या सबैमा मानव जातिलाई पुँजीवादी समृद्धिको लालसाले धकेल्यो । आज व्यक्तिगत सम्पत्तिप्रति दासत्वका कारण प्रत्येक व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग पलपल सतर्क भर हिँड्नुपर्ने असुरक्षित मानव समाज निर्मित हुन पुग्यो । आधा जनसंख्या महिलालाई निर्लज्ज ढंगले पुँजीवादले बेच्ने क्रम जारी छ । मानव अधिकार र सुशासन पढाउने पुँजीवादले अपराधीको अवैध पैसा सुरक्षित गर्ने स्विट्जरल्यान्डहरू निर्लज्ज जन्माइरहेछ ।
पुँजीवादी समृद्धिले मानिसका बीच भाइचारा होइन, मानिसमाथि शोषण, उत्पीडन, युद्ध थोपर्‍यो र मानवता ध्वस्त बनायो । पुँजीवादी व्यवस्थाले निर्माण गरेको समृद्धि मानवताविरोधी हो । किनभने यसले उत्पादित वस्तुहरूको वितरण असमान रूपमा गर्‍यो । असमान वितरित सम्पत्ति समुदायमा हैन, व्यक्तिमा केन्द्रीकरण पुँजीवादी समृद्धिको गुदी हो, जसबाट मान्छे अमानवीय बन्दै जान बाध्य हुन्छन् ।
संसारभर पुँजीवादी व्यवस्थाले ल्याएको यसप्रकारको मानवताविरोधी र विनाशकारी समृद्धिको विकल्पबारे न्यायप्रेमीले बहस चलाइरहेका छन् । अबको मानव समाजको समृद्धिको यात्रा भौतिक विकास मात्र एजेन्डा भएको हुनु कदापि हुँदैन । त्यो मानवताका पक्षमा र प्रकृति तथा सांस्कृतिक धरोहरको रक्षा गर्ने एजेन्डा प्राथमिक हुनुपर्छ । मानवताको प्रवद्र्धन तब सम्भव छ, जब समृद्धिको लाभ सबै मानिसले समान रूपमा उपयोग गर्न पाउँछन् ।
जब जंगबहादुर राणाले बेलायती साम्राज्यवादको गुलामी सुरु गरे र चन्द्रशमशेरले त्यसलाई नयाँ उचाइमा उठाएर उनीहरूको स्वार्थअनुरूपदेशमा नीति तय गर्न थाले, त्यहीँबाट नेपालको समृद्धिको यात्रा ओरालो लाग्न सुरु भएको होइन ?
प्रकृति र सांस्कृतिक धरोहरको रक्षा तब सम्भव हुनेछ जब विज्ञान प्रविधिको प्रयोग नाफाका निम्ति व्यक्तिको सनकमा आधारित भएर प्रयोग नहोस् बरु समुदायको हितमा समुदायको निर्णयमा मात्र प्रयोग होस् । काठमाडौंमा काठमान्डु मल बनाउने तर सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा रहेको सुनधारा त्यही कारणले सुक्ने भएपछि के काम भयो ? भोटाहिटीमा सब वे बनाउने तर भोटाहिटी नामको ऐतिहासिक ढुंगेधारा पुरिदिने कस्तो कम हो ? वागमती उपत्यकामा विकास गर्दा सबै पानीको मुहान सुकाइदिने कस्तो विकास हो ? वागमती उपत्यकाका नेवार बस्तीमा रातभरि पनि छोरी मान्छे हिँड्न सक्थे तर विकसित वागमती उपत्यकामा दिउँसै महिला सतर्क हुनुपर्ने कस्तो विकास भयो ?
नेपालको सत्ताधारी धारको कुरा सुन्दा यस्तो भान हुन्छ कि समृद्धिको उपनिवेशवादी अवधारणा दिमागमा हावी छ । मेलम्चीका सन्दर्भमा त्यही लाग्छ । वागमती उपत्यकाका पानीका मुहान सबै सुकाइदिने गरी विगतका शासकले शासन गरे, अब यहाँ सकियो पानी अनि मेलम्ची लुट्न जाने भनेजस्तो भयो । काठमाडौंको तत्कालको समस्या हल गर्न मेलम्ची ल्याउने तर मेलम्ची सुक्यो भने के गर्ने ? मेलम्चीमा जनसंख्या बढेपछि के पिउने ?
यो त उपनिवेशवादी ढर्रा भयो । मेलम्ची ल्याउने योजनासँगै वागमती उपत्यका आफैँलाई पानीबाट हराभरा बनाउने योजनाबारे कुनै सोच छैन । घातक विकासको मोडेल र राजनीतिले वागमती उपत्यकाका मुहानहरू सुकेका छन् । पुन: धर्ती सिञ्चन प्रविधिबाट फेरि नदीहरू बगाउन सम्भव छ भनी विज्ञानले विभिन्न देशमा प्रमाणित गरिसक्यो, त्यस्तो दूरगामी प्रकृतिको रक्षाको दिशामा सोच्न मानौं जरुरी छैन ।
यी थोरै दृष्टान्तबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि समृद्धिको वैकल्पिक मोडेलबारे गम्भीर हुनैपर्छ । नेपाललाई लैजान खोजेको कुन समृद्धितिर ? यसको उत्तर दिनैपर्छ, अन्यथा अपरिभाषित समृद्धिको दिशाहीन दु:खको यात्रामा धकेल्ने अधिकार दुई तिहाइ त के, सर्वसम्मतिलाई पनि नैतिक रूपमा हुँदैन । पुँजीवादी व्यवस्थाको मानवताविरोधी विनाशकारी समृद्धिका यात्रीहरूलाई भेडाको बथानसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाल सबैभन्दा पुछारतिरको अशक्त भेडा हो ।
शक्तिशाली भेडाहरू पृथ्वी र मानव जाति सिध्याउने भीरतिर सबैभन्दा अगाडि अगाडि छन्, नेपाल भीरबाट सबैभन्दा टाढा रहेकाले समृद्धिको पुरानो बाटो परिवर्तन गरेर नयाँ दिशातिर दौडिने अवसर पनि बचेको छ । विकसित भनिएका देशले घाउ पुर्नुपर्नेछ, हामीसँग समृद्धिले ल्याएको धेरै घाउ छैन । कतिपयले तर्क गरेको सुनिन्छ– समृद्धिको वैकल्पिक कोर्समा जान हामी मात्र सक्दैनौं । गरिब भएर बसिरहन पनि सक्दैनौं, पुरानै मोडेलमा आफ्नो बुताले भ्याएजति मानवीय र प्रकृतिप्रेमी बन्दै समृद्धितिर जानुपर्छ ।
यो तर्कको दाबी यही हो कि मानवताविरोधी र विनाशकारी भए पनि समृद्धिमा जान सम्भव छ । साँच्चै सम्भव छ त ? समृद्धि, प्रगति, विकास, मुक्तिजस्ता अवधारणा समयसापेक्ष विषय हुन् भन्ने प्रस्टै छ । यस कोणबाट हेर्दा आजको नेपाली भूखण्ड झन्डै सय वर्षअगाडि छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा धेरै पछाडि थिएन । हामीसँग आफ्नै फलाम, तामा, कपास, ऊन, सिस्नो, अल्लो र त्यसबाट हतियार, ज्वावल, भाँडाकँुडा र कपडा बनाउने प्रविधि थियो । हामीसँग तेल पेल्ने कोल, सक्खर बनाउने प्रविधि, पानी घट्ट, ढिकीजाँतो, नाङ्लो, चाल्नो छँदै थिए ।
आफ्नै बयलगाडा, गोरु नार्ने विधि, खेतीपाती प्रविधि, आफ्नै बीउ, आफ्नै खाद्य शास्त्र, आफ्नै उपचार विधि एवं औषधि थिए । ललितकलाका सबै आयाम हाम्रो आफ्नो सभ्यतालाई मनग्यै अगाडि बढाउन सक्ने स्तरमै थिए । राजा महाराजाका लागि विलासिताका र नुनलगायत केही वस्तुबाहेक आधारभूत आवश्यकताका अधिकांश सामग्री नेपालभित्र समुदायमै उत्पादन हुन्थ्यो । त्यही नेपालभित्रै उत्पादन हुने स्थिति त्यतिबेलाको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको समृद्धितिर फर्किएको हाम्रो मुख्य गुदी थियो ।
जंगबहादुर राणाले बेलायती साम्राज्यवादको गुलामी जब सुरु गरे र चन्द्रशमशेरले त्यसलाई नयाँ उचाइमा उठाएर उनीहरूको स्वार्थानुरूप देशमा नीति तय गर्न थाले, त्यहीँबाट नेपालको स्वाभाविक समृद्धिको यात्रा ओरालो लाग्न सुरु भएको होइन ? बेलायती साम्राज्यवादी स्वार्थपूर्तिका लागि राणाकालमा फलाम तथा तामाको खानी र कपास खेती बन्द गरेपछि नेपालको आधुनिक गरिबीको यात्रा वेगवान् भएको हो । सामन्तवादी समाजको मुख्य फलाम, कपास र तामा ब्रिटिस शासित भारतसँग किन्नु परेपछि सम्पत्तिजति पानीजस्तै भारत पस्न सुरु भएको हो ।
त्यो क्रम झन् झन् बढ्दै गयो र गइरहेछ । विसं २००७ पछि पनि यही क्रम अगाडि बढ्यो । शीतयुद्धताका भारत रूसतिर ढल्केको अवसर छोपेर पञ्चायतले रूस र चीनबाट भीख मागेर पूर्वपश्चिम राजमार्ग, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला उद्योग इत्यादि भित्र्याएको हो ।
पञ्चायतले विकास गर्न खोजेको समृद्धिमा बीउ थिएन । बीउका लागि फेरि खन्न थाल्नुपर्थो बन्द भएको फलाम खानी, सुरु गर्नुपथ्र्याे कपास खेती आदि । पञ्चायती शासकहरूले भारतको दलाली छाडेका थिएनन् र सामन्तवादी रजाइँको प्रवृत्ति पनि छाड्न सकेका थिएनन् । त्यसैले परनिर्भरताको नेपाली वेगलाई उनीहरू रोक्न सक्ने थिएनन् ।
विसं १९८० को दशकबाट विश्व पुँजीवादले विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन र आईएमएफमार्फत निजीकरण र उदारीकरणको नीति लिएर आयो । नेपाली शासकहरूले आँखा चिम्लेर कथित दाताका साङ्लामा सहीछाप गर्दै कमिसनको मुठ्ठा समाउँदै पञ्चायतले मागेको भीखका उद्योगहरू पनि कौडीको भाउमा बेच्न तल्लीन भए । यस कदमले नेपालमै बच्ने थोरबहुत पैसा पनि बिदेसिन बाध्य भयो, भइरहेछ । राणाकालबाट सुरु भएको यो दरिद्रताको यात्रा आजसम्म पुग्दा विकराल भएको मात्र न हो । गन्यमान्य अर्थशास्त्री नै चाहिँदैन, सरल ढंगले सोच्दा पनि बुझिन्छ । जुन घरले गर्ने आम्दानी आधारभूत आवश्यकताका सामान खरिद गर्दा सबै सकिन्छ भने त्यो घरमा बचत कहिल्यै पनि हुँदैन, त्यो परिवार समृद्ध हुन सक्दैन । आज नेपालको हालत ठीक त्यही हो ।
जीवनका आधारभूत सात आवश्यकता छन्– खाना, नाना, आवास, उपचार, शिक्षा, मनोरञ्जन र विविध । यी आधारभूत आवश्यकतालाई चाहिने अधिकांश सामान हामी आफैं उत्पादन गर्दैनौं, बरु त्यसका निम्ति बेलायतदेखि कतारसम्म पुगेर ल्याएको पैसा विदेश नै पठाउन बाध्य छौं । यही होइन हाम्रो गरिबी र असमृद्धिको मूल जरो ? कतिपयले भट्टीगफ दिन्छन् कि नेपाली अल्छी भएर गरिब भएको । के अल्छी मान्छे जान्छ नचिनेको देशमा मर्न तयार भएर कमाउन ? जान्छ कोही अल्छी साउदीको धूपमा पोलिन ? माटो खन्दाखन्दै जीवन सक्ने नेपाली मुसहर अल्छी हो ? अल्छी हो त्यो भारतमा बस्ने नेपाली चौकीदार जसले पूर्ण बैंस दाम्पत्य सुख भोग्न सक्दैन ?
बिल्कुल गलत कुरा हुन् । श्रमप्रति अवहेलनाको वर्णवादी संस्कृतिको प्रभावले केहीमा त्यो समस्या भए पनि आम नेपालीको गरिबीसँग त्यसको साइनो छैन । विषय प्रस्ट छ, नेपाल चलिआएको विनाशको समृद्धितिर समेत अगाडि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण साम्राज्यवादी हस्तक्षेप हो ।
साम्राज्यवादी–प्रभुत्ववादी हस्तक्षेप तब सम्भव भयो जब देशका शासक डफ्फा साम्राज्यवाद अर्थात विदेशी शासकका मूलत: दलाल बन्न तयार भए । नेपालका विगतका असल नियतका देशभक्त शासक पनि देशको हितमा किन असफल भए त ? सबै शासक पूर्ण रूपमा दलाल थिएनन् । यसकारण कि उनीहरूले देशभित्रका जनता अर्थात सबै राष्ट्रियताका जनता र उत्पीडित हरूलाई एकताबद्ध गर्न चाहेनन् । मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको भाषामा भन्दा ‘बाहुनवादीले अरूलाई शासनमा समावेश हुनै दिएनन् ।’
अखिल जनता शासनमा समावेश नभएपछि एकाध देशभक्त शासक पनि असफल हुनु अनिवार्य थियो । यसरी वैदेशिक हस्तक्षेप, शासकहरूको भ्रष्ट तथा दलाल प्रवृत्ति र नेपालभित्रको असमावेशिता नै नेपालको असमृद्धिको इतिहासको कथाका मुख्यपाना हुन् । असमृद्धिको इतिहासलाई अलप बनाएर समृद्धिको यात्रा सुरु हुँदैन । यो इतिहाससँग समृद्धिको ठेक्का लिएका शासकीय धारको संवाद जनताले कहाँ देख्न पाउँछन् ?
(लेखको अर्को खण्ड यसै स्तम्भमा भोलि प्रकाशन हुनेछ ।)
प्रकाशित : माघ १३, २०७५ ०८:२७